‘भारतमा सल्लाह माग्छन् तर नेपालमा कार्यान्वयन गर्दैनन्’ | सहारा टाइम्स
Home » antrwarta » ‘भारतमा सल्लाह माग्छन् तर नेपालमा कार्यान्वयन गर्दैनन्’
SAHARA TIMES Sunday, October 2, 20160No comments
–जगीलाल राय यादव
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’ सँग भारत भ्रमणमा जानु भएका तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका महासचिव जंगीलाल राय यादव सरकारी डेलिगेशनमा गएपनि उहाँ मधेशका प्रतिनिधि हुनुको साथै आन्दोलनमा हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यो भारतसँग मधेशको समस्या समाधानका लागि धेरै अर्थ राख्ने भएकाले भ्रमणमा रहनु भएका महाचिव जंगीलाल राय यादवसँग सहाराटाइम्सका लागि फोनमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग तपाई पनि भ्रमणमा त्यहाँ पुग्नु भएको छ के छ त्यहाँकाे राजनीितक गतिविधि ?
–हुन त प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण पूर्णत सद्भावना भ्रमण हो र यसमा सबै कुरा औपचारिक रुपमा भएका हुनाले उपलब्धीका हिसाबले मलाई खासै महत्वपूर्ण लागेन । जहाँसम्म मलाई थाह छ, समस्या समाधानका लागि ग्रीन सिंगनल कहि कतैबाट देखिएको छैन । बन्द कोठामा गोप्य रुपमा कसैले केही कुरा गरेको होला त्यो बेग्लै कुरा हो तर उल्लेखनीय उपलब्धी होला जस्तो लाग्दैन । यसो भनौ न सविधानलाई भारतले खुलेर रिक्गनाइज गरेको छैन । मेरो विचारमा मधेशको समस्या जबसम्म समाधान हुँदैन तबसम्म सविधानलाई भारतले स्वागत गर्दैन जस्तो लाग्छ ।
मधेशको समस्या समाधान हुनेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणमाथि आशा थियो तर तपाई त निराशजनक कुरा गर्नुभयो त ?
–म निराश छैन । यसैपनि यो भारत भ्रमणसँग मधेशको मागसँग केही लेनादेना छैन तर कुनै पनि देशको प्रधानमन्त्री कुनै देशको औपचारिक वा राजनीकिय भ्रमण गर्छन् भने त्यो धेरै महत्वपूर्ण कुरा हुन्छ किनभने दुई देशको बीचमा अन्तरगं कुराकानी हुन्छ । र, भ्रमणले एक अर्का देशमाथि केही नकेही प्रभाव पारेको हुन्छ तर भ्रमणले नेपाललाई वा भारतले प्रभाव पार्ला जस्तो लाग्दैन त्यसमा पनि मधेशलाई झन असर पार्ने कुरै भएन । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो सम्बोधनमा मधेश शब्द उच्चारण नगरेपनि सविधानप्रति असन्तुष्ट रहेका सम्पूर्ण समुदायलाई समेटेर समस्या समाधान गरे मात्र सविधान कार्यान्वयन हुने भन्नु भएको कुराले पनि धेरै कुराको संकेत गर्दछ ।
तपाई त तीन दिनदेखि दिल्लीमा हुनुहुन्छ, विभिन्न नेता तथा व्यक्तिसँग भेटघाट भएको होला, कस्तो लाग्छ भारत मधेशको समस्याप्रति गम्भिर रहेको पाउनु भयो ?
–भारत भ्रमणको क्रममा म जो जोसँग भेटे, कुरा गरे ती सबैजना मधेशप्रति गम्भीर रहेको पाएको छु । मधेशको समस्या समाधान होस् भनि भारतका सबै नेताको चाहना र इच्छा छ । दुई देशबीचको सम्बन्ध कुटनीतिक मात्र नभएर समाजिक र पारिवारिक रहेको कुरा सबैले स्वीकारेका छन् त्यसैले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध अन्य देशको तुलनामा फरक छन् भने कुरा सबैले स्वीकार गर्छन् । कसैले भन्दैनन् कि मधेशको समस्या समाधान नहोस् ।
तर भारत भ्रमणमा आएका प्रधानमन्त्रीहरु तथा अन्य नेताहरुले यहाँ स्वीकार गरिसकेका तथा प्रतिवद्धता जनाईसकेका कुरा पन नेपालमा गएर लागु गर्दैनन् त्यसमा चित्त दुख्ने गरेको बताउँछन् । यो एउटा ठूलो समस्याको रुपमा रहेको छ । मैले धेरै नेताहरुसँग यस विषयमा कुरा गरे । उहाँहरुको एउटै भनाई छ कि नेपालबाट आउने प्रधानमन्त्री वा नेताहरुले यहाँ कुरा गर्छन्, प्रतिवद्धता गर्छन् तर नेपाल फर्केर सबै विर्सिन्छ । नेपालबाट आउने नेता तथा प्रधानमन्त्रीहरुलाई हामी आफै सल्लाह दिँदैनौ उनीहरुले उल्टै नै सल्लाह माग्छन् कि ‘आप लोग सल्लाह दिजिए, क्या करना हैं (तपाईहरु सल्लाह दिनुस् के गर्नुछ)’ तर नेपाल फर्केपछि केही हुँदैन भने व्यापक गुनासो छ । यहाँ आएर सल्लाह नमाग्दा पनि हुन्छ ती नेताहरुले टिप्पणी गर्दै भन्नुहुन्छ, यहाँ आएर उल्टै सल्लाह माग्छन् तर नेपाल फर्केर उल्टा सिधा बोल्छन् र कार्यान्वयन पनि गर्दैनन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड लगायत सम्पूर्ण भ्रमण दल दुई गते नेपाल फर्किदै हुनुहुन्छ, सायद तपाई पनि फर्किनु हुन्छ, के नेपाल फर्केपछि मधेशको समस्या समाधान हुन्छ त ?
–यो कुनै जादुको छडी होइन, जो छु मन्तर गरेपछि समाधान हुन्छ । मलाई त्यस्तो लाग्दैन । मैले यहाँ जो वतावरण देखे त्यसले त मधेशको समस्या समाधान होला जस्तो लाग्दैन । पहिले भन्दा परस्थिति झन विग्रिदै गइरहेको छ । त्यसैले मलाई आशा छैन कि प्रधानमन्त्री फर्केपछि पनि मधेशको समस्या समाधान हुन्छ । गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि भारत भ्रमणमा आएको बेला र अहिलेको बेलामा धेरै फरक छ । त्यो बेला त कमसे कम मधेशको समस्या समाधान हुने गरि संशोधन प्रस्ताव संसदमा लग्ने कुरा थियो । त्यही सल्लाह भएको थियो । तर अहिले त त्यो पनि छैन । यो भारत भ्रमणको अवधिमा मैले कतैबाट सविधान संशोधनको बारेमा अनौपचारिक, औपचारिक कुरा सुनेको छैन । ठोस रुपले त्यस्तो कुनै कुरा भएको छैन । अर्थात राजनीतिक उपलब्धि छैन भन्दा पनि हुन्छ । कुटनीतिक र दुई देशबीचको सम्बन्ध बनाउन यो भ्रमण सफल भएको कुरा मैले बुझेको छु ।
तपाई एउटा मधेशी दलको प्रतिनिधित्व गरेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण दलमा सहभागि भएर भारत जानु भएको छ, मधेशी मोर्चाको नेता पनि हुनुहुन्छ, मधेशको बारेमा त्यहाँका नेताहरुसँग के के कुरा भयो वा गर्नुभयो ?
–यहाँ मधेश सम्बन्धि त्यसप्रकारको कुनै पनि सेमिनार वा गोष्ठी, औपचारिक वा अनौपचारिक छलफलहरु भएको छैन जहाँ म आफ्नो कुरा राख्न पाउँ । मधेशको बारेमा बिफ्रिगं गर्न पाउँ । अथवा मलाई मधेशको बारेमा सोधेको पनि छैन । त्यस प्रकारको कुनै मञ्च भएको भए वा कार्यक्रम भएको भए म स्वभाविक रुपमा आफ्नो कुरा राख्थे । तर, यसो व्यवहारिक रुपमा साथी भाइसँगको भेटघाटमा त विभिन्न कुराहरु भएको छ त्यसको खासै अर्थ राख्दैन । शरद यादव, नितिशकुमारहरुसँग कुराकानीहरु भयो ।
त्यसको भए यो भ्रमण असफल भयो, उपलब्धीमुलक भएन भन्दा हुन्छ ?
–होइन, त्यस्तो होइन । असफल भयो भन्न मिल्दैन । भ्रमण सफल भएको छ । तर वर्तमान राजनीतिक अवस्था जस्तो छ त्यसको विषयमा खासै कुरा नभएको भन्नु मात्रै हो । यो भ्रमण उपलब्धीमुलक भन्दा पनि सदभावना भ्रमण हो । विगतमा हुने गरेको भ्रमण जस्तै परम्परालाई कायम राख्न यो भ्रमण भएको हो । भ्रमणको कुनै खास एजेण्डा थिएन, जो त्यसमा बहस होस् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेपाल फर्किसकेपछि सविधान संशोधनको कुरा अगाडि बढाउनु हुन्छ ?
–भारतमा त्यस प्रकारको कुनै कुरा भएको छैन तर भारत आउनु एक दिनअघि बालुवाटारमा मधेशी मोर्चाका नेताहरुलाई बोलाएर कुराकानी गर्नुभएको थियो । त्यो कुराकानीमा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणबाट फर्किने बित्तिकै सविधान संशोधनको कुरा अगाडि बढाउछु भन्नु भएको थियो तर अब हेरौ के छ अवस्था । उहाँ दुई गते फर्किनु हुन्छ र तीन गते अमेरिका जानु हुन्छ । यो अवस्थमा सविधान संशोधनको बारेमा केही होला जस्तो मलाई लाग्दैन ।
त्यसो भए के होला जस्तो लाग्छ तपाईलाई ?
–हाम्रो माग नै हो कि चाँडो भन्दा चाँडो सविधान संशोधन गरेर मधेशको समस्या समाधान गरोस् । मधेशी मोर्चाले पेस गरेको ११ बुँदे र २६ बुँदे माग अुनसार सविधान संशोधन गरि दिए हामीलाई पुग्छ । यो दिन वा त्यो गर्नुपर्छ भनि हामीले मिति तोकेको छैनौ चाडो हुनुपर्छ भनेका छौ । तर लक्षण राम्रो देखिएको छैन ।
तपाईहरुले भने अनुसारको सविधान संशोधन भएन भने के गर्नुहुन्छ ?
–हामीले गर्दै आएको काम गर्छौ त्यो हो आन्दोलन । हामीसँग आन्दोलन गर्ने विकल्प बाहेक अरु केही रहँदैन । तीन दलको रवैया हेर्दा सहज ढंगले मधेशको माग पूरा गर्ला जस्तो लाग्दैन त्यसका लागि फेरि भिषण आन्दोलन नै गर्नुपर्ला जस्तो लाग्छ ।
सरकार गठन भएको झण्डै दुई महिना हुन लागेका छन्, तपाईहरुको सहयोगमा गठन भएको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार र यसअघिको ओली नेतृत्व सरकारमा के फरक छ ?
–सारमा एउटै हो तर व्यवहारमा फरक देखिएको छ । कमसे कम प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले हामीसँग मानवीय व्यवहार गरिरहेका छन् । जो ओली सरकारले गरिरहेका थिएन । ओली सरकारले मधेशीलाई नेपाल हो जस्तो व्यवहार गरिरहेका थिएन । मधेशी होच्याउने, जिस्काउने काम एमालेले गरिरहेको थियो । मधेशमा कुनै समस्या नै छैन, यो सविधानले मधेशको सबै समस्या समाधान गरेको कुरा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा अ‍ोली तथा त्यस दलका नेताहरु भनिरहेका थिए । अहिले पनि भनि रहेका छन् । तर, प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले कमसे कम मधेशमा समस्या छ त्यसलाई समाधान गर्नुपर्छ । सविधान संशोधन हुनुपर्छ भनि तयार छन् । यो नै पोजेटिभ कुरा हो ।
सरकारले आज गर्यो यस्तो १२ महत्वपूर्ण निर्णय
काठमाडौं चैत २१ गते । लकडाउनमा रहेका जनतालाई उपभोग्यवास्तु तथा कृषि सामग्री सहज रुपमा पुर्याउनका लागि सरकारले केही महत्वपूर्ण निर्णयहरु ग...
कोरोनाको कहरः के गर्दैछ प्रदेश २ सरकार ?
जनकपुर चैत २१ गते । कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा उपचारको लागि प्रदेश सरकारले युद्धस्तरमा तयारीमा जुटेको छ । महामारीका कारण सरकारले जारी...